ShweMinThar: August 2016
လိင်နဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သင်တို့စိတ်ထဲရှိမှာတာတွေအားလုံးကို မခြွင်းမချန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရမယ့် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်အတွက် အရင်းနှီးဆုံး၊ လုံခြုံ စိတ်ချရဆုံး၊ အကျွမ်းကျင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ့် မိတ် (Mate) နဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ ၀၉-၄၃-၁၁၁-၀၀၀ ကို အခုပဲ ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။
လိငျနဲ့ မြိုးဆကျပှားကနျြးမာရေး ကိစ်စရပျတှနေဲ့ ပတျသကျလာရငျ သငျတို့စိတျထဲရှိမှာတာတှအေားလုံးကို မခွှငျးမခနျြ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောဆိုပွီး တိုငျပငျဆှေးနှေးလို့ရမယျ့ သူငယျခငျြးကောငျးတဈယောကျလိုအပျပါတယျ။
သငျ့အတှကျ အရငျးနှီးဆုံး၊ လုံခွုံ စိတျခရြဆုံး၊ အကြှမျးကငျြဆုံး သူငယျခငျြးတဈယောကျဖွဈလာမယျ့ မိတျ (Mate) နဲ့ တိုငျပငျ ဆှေးနှေးဖို့ ၀၉-၄၃-၁၁၁-၀၀၀ ကို အခုပဲ ဖုနျးဆကျလိုကျပါ။
When it comes to sexual and reproductive health issues, you better have someone to disclose everything you have in your mind.
MATE, who will become your most friendly, most trusted, most reliable and most competent buddy is just one call away. Call 09-43-111-000 right now to get your answers.
Mate Apps :
မနက် ၉နာရီကနေ ညနေ ၅နာရီအတွင်းပါ။
တခြားအချိန်တွေမှာလဲ admin ပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်လည်ဖြေဆိုပေးသွားမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် “သိလိုရာမေး” မျိုးဆက်ပြန့်ပွား ကျန်းမာရေးနှင့် လိင်ပညာပေးဝက်ဘ်ဆိုဒ်
✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌
မြန်မာလူငယ်များ မိမိတို့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗဟုသုတ အချက်အလက်များနဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို ရရှိအသုံးချစေရန်
“သိလိုရာမေး” ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာ အမေးအဖြေ ကဏ္ဍတွေအပြင် လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သန္ဓေတားဆေး အသုံးပြုပုံများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကျန်းမာရေး၊ လိင်မှ ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများအကြောင်း စတာတွေကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်မှာ
၀က်ဆိုဒ်မှာ ဆောင်းပါးပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ရေးသားဖော်ပြထားပြီး ၀က်ဘ်ဆိုဒ် အသုံးပြုသူများမှ မေးမြန်းလာမည့် မေးခွန်းများကို ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှ Editorial ၀န်ထမ်းများက ဖြေကြားပေးသွားမှာ
အမျိုးသမီးများစွာရှိသော်လည်း အနည်းငယ်ကသာ ဥပဒေ၏အကာအကွယ်ကို ယူကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် နေထိုင်သည့် (၃၅)နှစ်အရွယ် မသန်းသန်းဝင်း (အမည်လွှဲ)သည် အိမ်ထောင်ဖက်၏ နှိပ်စက်ခြင်းကို ကိုးနှစ်ကြာခံခဲ့သည်။ နှိပ်စက်မှုများထဲတွင် မျက်နှာ၊ ဦးခေါင်း၊ ရင်ဘတ်၊ ကျောကုန်း စသည့်နေရာများကို ဆောင့်ကန်ခြင်း၊ နီးစပ်ရာ အရာဝတ္ထုဖြင့် ကောက်ပေါက်ခြင်း၊ အော်ဟစ်ဆဲဆိုခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
အိမ်ထောင်သက် ကြာလာလျှင် ညှဉ်းပန်းခံရမှု တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းသွားနိုင်သည်ဟူသော သူ၏ မျှော်လင့်ချက်မှာလည်း လက်တွေ့ဖြစ်မလာပေ။
‘‘ကျွန်မကို ပြေးပြေးကန်တာ ဘောလုံးတစ်လုံးလိုပဲ။ လူရှေ့သူရှေ့ နေရာဒေသ မရွေးဘူး။ သူစိတ်ဆိုးတာနဲ့ ကျွန်မကို ရိုက်နှက်တော့တာပဲ။ ရဲတိုင်ရင် ကလေးတွေကိုပါ နှိပ်စက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်’’ ဟု ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးသုံးဦး၏မိခင် မသန်းသန်းဝင်းက ပါးပြင်မှမျက်ရည်စများကို သုတ်ရင်း ရှင်းပြသည်။
အိမ်ထောင်ကျစဉ်က မသန်းသန်းဝင်း၏ မိဘများက သဘောမတူသောကြောင့် စိတ်နာပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ နှိပ်စက်ခဲ့သည်ဟူသော ခင်ပွန်းသည်၏ အခြေအနေက လွန်ခဲ့သည့် သုံးလအတွင်း ပိုဆိုးလာသည်။ ခင်ပွန်းသည်က ဓားတစ်ချောင်းကို သွေး၍ ‘‘ဒီဓားနဲ့ နင့်ကိုသတ်မှာ’’ဟု ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည်ဟု မသန်းသန်းဝင်းက ဆိုသည်။
မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကို ကြုံတွေ့နေရသော အမျိုးသမီး အများအပြားသည် မသန်းသန်းဝင်းကဲ့သို့ပင် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားလေ့မရှိကြောင်း ကာယကံရှင်များ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက ပြောသည်။
အမျိုးသမီး အများအပြားသည် ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ အိမ်ထောင်ကွဲလျှင် တစ်လင်ကွာဟု ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခံရနိုင်ခြင်း၊ ကလေးများ စိတ်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ကြောင့် သည်းခံအလျှော့ပေးတတ်ကြသည်ဟု ၎င်းတို့ကဆိုသည်။
ဇူလိုင် ၁၃ ရက် နံနက်ပိုင်း ရန်ကုန် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်မှ ဒေါ်စုစုလှိုင်က အိပ်ပျော်နေသူ ခင်ပွန်းသည်၏ဦးခေါင်းကို ရဲတင်းဖြင့် ခုတ်ပြီးနောက် ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်အဖမ်းခံခဲ့သည်ဟု ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်စုစုလှိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြန်အောင်မြို့မှ ပြောင်းရွှေ့လာကြသည်မှာ နှစ်လခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။
ခင်ပွန်းသည်က သူ့ကို နှိပ်စက်ကြောင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရှိသဖြင့် ဗိုက်ကိုမကန်ရန် ဒေါ်စုစုလှိုင် တောင်းပန်သည့်အသံ ညတိုင်းကြားရကြောင်း အိမ်နီးချင်းတို့က ပြောသည်။
‘‘ရိုက်တာ မခံနိုင်လွန်းလို့ မိန်းမက အိမ်ပေါ်က ဆင်းပြေးတဲ့ အဖြစ်မျိုးတောင် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်’’ ဟု ၎င်းတို့အိမ်ရှေ့တွင် နေထိုင်သည့် ဒေါ်စိုးစိုးအေးကပြောသည်။
ခင်ပွန်းသည်က ထွက်ပြေးသည့် ဒေါ်စုစုလှိုင်ကို ဆံပင်ဆွဲ၍ အိမ်ထဲပြန်ခေါ်သွားသည်ကို မြင်တွေ့ဖူးကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အခြေစိုက်ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Irrawaddy Women’s Network မှ ဒုတာဝန်ခံ မသီတာမြင့်က ခင်ပွန်းသည်ကို အိမ်ဦးနတ်အဖြစ် သဘောထားနေကြခြင်းမှာ မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်ခြင်းကို အားပေးရာရောက်သည့် အချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်သည်။
၎င်းတို့၏ကွန်ရက်သည် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရွာပေါင်း ၃ဝ တွင် လိုက်လံ၍ ပညာပေးဟောပြောပြီးဖြစ်သည်။
နိုင်ထက်စီးနင်းပြုခြင်း ပြုလာပါက ခေါင်းငုံ့မခံသင့်ကြောင်း၊ တိုင်ကြားနိုင်သည့် ဥပဒေများရှိကြောင်း ဟောပြောခြင်းကိုအထင် လွဲသူများရှိနေကြောင်း မသီတာ မြင့်က ပြောသည်။
‘‘လင်မယားတွေကြားမှာ ရန်တိုက်ပေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး’’ဟု သူကဆိုသည်။
အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရခြင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မပြုဘဲဖြစ်လေ့ရှိသည့် အိမ်တွင်းရေး ပြဿနာအဖြစ်သာ သဘောထားနေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရကြောင်း သူကပြောသည်။
နာမည်ကျော် စာရေးဆရာမကြီး စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)က အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု လျော့နည်းလာစေရန်အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးက အဓိကကျကြောင်း ပြောသည်။
အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းများကို သူ၏ဝတ္ထုများတွင် ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးများ အခက်အခဲကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရဲသည့်သတ္တိ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်အတွက်လည်း တွန်းအားပေးသင့်ကြောင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်ဝေခြင်း စသည့် အသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကို အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝစေရန်အတွက်လည်း အမျိုးသမီးများသာမက အမျိုးသားများအနေဖြင့်လည်း စာများများဖတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောသည်။
တရားဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း၍ရသည်ကိုပင် နားလည်သူနည်းပါးကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း တိုင်ကြားချက်ရှိလာလျှင် ထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်သင့်ကြောင်း သူကပြောသည်။
‘‘ဖြစ်ပြီးမှ ဖြေရှင်းတာထက် မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ နည်းလမ်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ’’ ဟု သူကဆိုသည်။
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ရဲအုပ် ဇော်ဝင်းနိုင်က အိမ်ထောင်ဖက်ကို တုတ်၊ ဓားသုံးပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ လွန်စွာဆိုးရွားသည့် အပြုအမူဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားသည်။
စခန်းသို့ လာရောက်တိုင်တန်းမှုရှိပါက နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့နှင့် ဦးစွာညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခိုင်းကြောင်း၊ ထိုအဆင့် မအောင်မြင်မှ အမှုဖွင့်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း ပြောသည်။
ရန်ကုန် ဒလမြို့ နယ်မှ ဒေါ်အေးသန္တာက ၎င်း၏ခင်ပွန်းသည် ဦးတင်မောင်ဝင်း (ခေါ်)ဦးထွန်းရွှေကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့် တရားစွဲခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့ တရားရုံးချိန်းမှအပြန်တွင် ဦးတင်မောင်ဝင်းက လည်ပင်းကို ဓားဖြင့်ထိုးသဖြင့် ဒေါ်အေးသန္တာ သေဆုံးသွားကြောင်း မြို့နယ်ရဲစခန်းမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အိမ်ထောင်ဖက်များကြား အမှုဖွင့်ထားပါက တိုင်ကြားသူ၏ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် အမျိုးသားကို ၎င်း၏ဇနီးသည်ရှိတတ်သည့် နေရာများသို့ သွားလာခွင့် ပိတ်ပင်သင့်ကြောင်း ရန်ကုန် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ အမျိုးသမီးအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မဝင်းဝင်းခိုင်ကပြောသည်။
‘မိန်းမနဲ့နွား မသနားရ၊ မိန်းမဆိုတာ အရိုးကွဲအောင်ရိုက်မှ အသည်းစွဲအောင်ချစ်တာ’ ဟု တချို့က နောက်ပြောင် ပြောဆိုကြကြောင်း၊ ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းသည် ရိုက်နှက်ခြင်းကို အားပေးရာရောက်ကြောင်း သူကထောက်ပြသည်။
၈၈ မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း) မှ အလုပ်သမားရေးရာဌာန ဒုတာဝန်ခံ ဒေါ်သက်သက်အောင်ကလည်း တိုင်ကြားခံရသူ အမျိုးသားကို လိုအပ်ပါက ၂၄ နာရီခန့် ထိန်းသိမ်းထားသင့်ကြောင်း သုံးသပ်သည်။
‘‘အရမ်းဆိုးသွမ်းနေတဲ့သူဆိုရင် ခဏချုပ်ထားတာ အသင့်တော်ဆုံးပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအတိုင်းထားရင်လည်းဇနီးအပါအဝင် တခြားသူတွေကိုပါ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်’’ ဟု ဒေါ်သက်သက်အောင်ကဆိုသည်။
ပညာပေးဟောပြောမှု အစီအစဉ်များတွင် အမျိုးသားပါဝင်မှုရှိလာပါက အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပြဿနာ လျော့နည်းလာမည်ဟု သူကပြောသည်။
ရန်ကုန် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းသူ ကလေးနှစ်ဦးဖခင် ဦးနေမျိုးက အိမ်ထောင်ဖက်အချင်းချင်း စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်အောင် မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောသည်။
‘‘ကိုယ်ချစ်လို့ လက်ထပ်ထားတာပဲ။ စိတ်အခန့်မသင့်လို့ စကားများတာတော့ ရှိတာပေါ့။ ယောက်ျားရင့်မာကြီးက အားနွဲ့တဲ့မိန်းမသားကို အနိုင်ကျင့် ရိုက်နှက်တယ်ဆိုတာက လူကြားလို့မှ မကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ’’ ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ရန်ကုန် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်မှ ကလေးနှစ်ဦးမိခင် ဒေါ်ဖြူဖြူ (အမည်လွှဲ)သည် ခင်ပွန်းယောက္ခမများ၏ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အနိုင်ကျင့်သည့်ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ဟုဆိုကာ အိမ်ထောင်သက် ဆယ်နှစ်အကြာ ဇူလိုင်လဆန်းတွင် ခင်ပွန်းသည်နှင့် လမ်းခွဲခဲ့သည်။
မျက်နှာရောင်ကိုင်း၊ ခေါင်းကွဲ၊ လက်ကျိုးသည်အထိ နှိပ်စက်ခံရဖူးကြောင်း၊ အိမ်အပြန်နောက်ကျသည့်နေ့များတွင် ‘မိန်းမပျက်’ ဟု အခေါ်ခံရကြောင်း သူကပြောသည်။
‘‘သူ လက်သီးနဲ့ထိုးလို့ ကျွန်မမျက်လုံးမှာ သွေးခြည်ဥဖူးပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်မဝဋ်ကျွတ်သွားပြီ’’ ဟု သူကဆိုသည်။
ရန်ကုန် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် နေထိုင်ပြီး ခင်ပွန်းသည်၏ လစာတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ မှီခိုနေထိုင်နေသည့် (၂၃)နှစ်အရွယ်ရှိသူ ကလေးတစ်ဦးမိခင် မယုယုထွန်း (အမည်လွှဲ)ကလည်း ခင်ပွန်းသည်၏ အကြမ်းဖက်မှု ဒဏ်ကိုခံရသူဖြစ်သည်။
ခင်ပွန်းသည်က လုပ်ငန်းခွင်အဆင်မပြေသည့်ရက်များတွင် အရက်သေစာသောက်စားပြီးမှ အိမ်သို့ပြန်လာကာ အော်ဟစ်ဆဲဆို၊ အိုးခွက်ပန်းကန်များကို ရိုက်ခွဲတတ်ကြောင်း သူကပြောသည်။
‘‘သူ အဆင်မပြေတော့ ကျွန်မလည်း အရစ်ခံရတာပေါ့’’ ဟု မယုယုထွန်းကဆိုသည်။
၎င်း၏သမီးအား မိတကွဲ၊ ဖတကွဲအဖြစ်သို့မရောက်စေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး သည်းခံသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း ယခုထက် ပိုမိုအနိုင်ကျင့်ခံရပါက ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမည်ဟု ဆိုသည်။
လင်မယားအချင်းချင်း ဖြစ်စေကာမူ အလိုမတူဘဲ လိင်ဆက်ဆံပါက မုဒိမ်းမှုမြောက်သော်လည်း ထိုဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားသူမရှိသလောက်နည်းပါးကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ အထက်တန်းရှေ့နေ ဦးမင်းသက်ဇင်က ပြောသည်။
နှိပ်စက်ခံရပါက အပြင်းအထန် နာကျင်စေမှု၊ ဓားလက်နက်တို့ဖြင့် နာကျင်စေမှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သူကရှင်းပြသည်။
‘‘ဒီပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကို ဇနီးသည်အများစုက မသိကြပါဘူး’’ ဟု ဦးမင်းသက်ဇင်ကဆိုသည်။
အိမ်ထောင်ဖက်အချင်းချင်း အနိုင်ကျင့်ခြင်းသည် လင်မယားကြားထဲမှ အတွင်းရေးကိစ္စသာဖြစ်သည်ဟူသော အယူအဆကို မဖျောက်ဖျက်နိုင်ပါက မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု၊ အရေးယူမှု ရှိလာမည်မဟုတ်ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကျား/မ တန်းတူရေးကွန်ရက်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မေစံပယ်ဖြူက Myanmar Now အား ပြောသည်။
‘‘အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုဟာ ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့ ပြစ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီးတွေရော အမျိုးသားတွေရော သိဖို့၊ နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပဒေအရလည်း စနစ်တကျအရေးယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်’’ ဟု ဒေါ်မေစံပယ်ဖြူကေပြောဆိုလိုက်သည်။
Wed, 2016-08-10 09:18
Labels: Lifestyle, News and Info
Posted by Alex Aung at 3:13 PM No comments:
ချင်းအမဲသားသုပ် - ချဉ်ပေါင်ဟင်းချို - ငရုတ်ခြောက်ထောင်းနဲ့တို့စရာအစုံ
အမဲသားကိုဆီမပါဘဲနဲ့ သုပ်ပြီးပြန်ထောင်းမယ်၊ အမဲသားပြုတ်ရည်လေးကို ချဉ်ပေါင်ဟင်းချိုအဖြစ်ဖန်တီးမယ်၊ပြီးတော့ ငရုတ်သီးခြောက် ထောင်းထဲကို အမဲသားပြုတ်အနည်းငယ်ထည့်ထောင်းပြီးတော့ကာ တို့စရာအစုံနဲ့အတူ ထမင်းပူပူလေးတွဲဖက်စားကြည့်ရအောင်။
အမဲမိုးခိုသား ၃၀ကျပ်သား၊ ချင်း(ဂျင်း) အနည်းငယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၁၀တက်၊ ဖယ်ဖယ်ရွက် ၂ပင်၊ ရေသန့် ၁.၅လီတာ၊ ဆား အနည်းငယ်၊ အသားမှုန့် ၁ဇွန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ၁၀တောင့်၊ ငရုတ်ကောင်းစေ့ ၁၀စေ့၊ ကြက်သွန်နီ ၂လုံး၊ ဆလတ်ရွက် ၁စည်း၊ သံပရာသီး ၁လုံး။
ချင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းနှင့် ငရုတ်ကောင်းစေ့လှော်တို့ကို မညက်တညက်ထောင်းပြီး ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးပြီး ရေစိမ်ထားပါ။
အမဲမိုးခိုသားနူးလျှင် ပါးပါးလှီးပြီး ကျေညက်အောင်ထောင်း၍ အသားမျှင်ထားပါ။
အသင့်မျှင်ထားသော အမဲမိုးခိုသားကို ထောင်းထားသော ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ငရုတ်ကောင်းစေ့လှော်၊ ကြက်သွန်နီနှင့်ရောသုပ်ပါ။ အရသာကို ဆား၊ အသားမှုန့်ထည့်ပါ။
အမဲမိုးခိုသားသုပ်ကို ညက်အောင်နောက်တစ်ကြိမ်ထောင်းပြီး ဆလတ်ရွက်၊ သံပရာသီးဖြင့် သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
(အမဲမိုးခိုသားကို အသားမျှင်လုပ် - သုပ် - ပြန်ထောင်းပြီး စားကာနီးမှ သံပရာရည်ဆမ်းပြီးစားနိုင်ပါသည်။)
အမဲသားပြုတ်ရည် ၁.၅ လီတာ၊်ဆား အနည်းငယ်၊ အသားမှုန့် ၁ဇွန်း၊ ချဉ်ပေါင်ရွက် ၁စည်း။
အမဲမိုးခိုသားကို ချင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆား၊ အသားမှုန့်၊ ဖယ်ဖယ်ရွက်တို့ဖြင့် အမဲပြုတ်ရည်ပြုလုပ်ပါ။
အမဲပြုတ်ရည်အသင့်ဖြစ်လျှင် ဆား၊ အသားမှုန့်တို့ ထပ်ဖြည့်ပြီး အသင့်သန့်စင်ထားသော ချဉ်ပေါင်ရွက်ကိုထည့်ချက်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
(ခဏနေက အမဲသားပြုတ်ထားသောရေကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။)
ငရုတ်သီးခြောက် ၂၀တောင့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၅တက်၊ ဖယ်ဖယ်ရွက် အနည်းငယ်၊ ဆား အနည်းငယ်၊ အမဲမိုးခိုသားပြုတ် အနည်းငယ်၊ သခွားသီး ၂လုံး၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၃လုံး၊ ဆလတ်ရွက် ၁စည်း။
ငရုတ်သီးခြောက် ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ဖယ်ဖယ်ရွက်၊ ဆား အနည်းငယ်တို့ကို ညက်အောင်ထောင်းပါ။
အသင့်ပြုတ်ထားသော အမဲမိုးခိုသားကို ပါးပါးလှီးပြီါ် ကျေညက်အောင်ရောထောင်းပါ။
သန့်စင်ထားသော သခွားသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆလတ်ရွတ်တို့နှင့်တွဲ၍ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
(ချင်းအမဲသားသုပ်ပြင်ဆင်တုန်းက အမဲမိုးခိုသားပြုတ်အသားမျှင်ထားစဉ် အနည်းငယ်ချန်ထားပြီး ငရုတ်ခြောက်ထောင်းချိန်မှာ ထည့်သုံးနိုင်ပါသည်။)
ချင်းကြက်သားသုပ် - မုန့်ညှင်းဟင်းရည် - ချင်းငရုတ်သီးထောင်းနှင့် တို့စရာစုံ
ချင်းရိုးရာဟင်းလျာပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပုံက ဗမာတွေချက်သလို ဆီသုံးမများပါဘူး။ ဒါက ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်သား (အကောင်လိုက်) ၁ကောင်၊ ဆား ၁ဇွန်း၊ အသားမှုန့် ၁ဇွန်း၊ ချင်းရည်(ဂျင်းရည်) အနည်းငယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၃တက်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ၁၀တောင့်၊ ဖယ်ဖယ်ရွက် အနည်းငယ်၊ ကြက်သွန်နီ ၂လုံး၊ ဆလတ်ရွက် အနည်းငယ်၊ သံပရာသီး ၁လုံး။
ကြက်အကောင်လိုက်ကိုသန့်စင်ပြီး ဆား၊ အသားမှုန့် ၊ချင်းရည်အနည်းငယ်တို့နှင့် ကျက်ပြီး နူးအောင်ပြုတ်ထားပါ။
ချင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ငရုတ်သီးစိမ်းနှင့် ဖယ်ဖယ်ရွက်တို့ကို သီးခြားစီညက်အောင်ထောင်းပြီး ကြက်သွန်နီကိုတော့ ပါးပါးလှီးပြီး ရေစိမ်ထားပါ။
နူးအောင်ပြုတ်ထားသော ကြက်သားကို အရိုးထုတ်ပြီး အသားကို အမျှင်လိုက်မွှထားပါ။
အသင့်မွှထားသော ကြက်သားပြုတ်ကို ထောင်းထားသော ချင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ဖယ်ဖယ်ရွက်တို့နှင့်အတူလှီးပြီး ရေစိမ်ထားသော ကြက်သွန်နီကိုပါရောပြီးသုပ်ပါ။
အရသာကို ဆား၊ အသားမှုန့်အနည်းငယ်ဖြင့် ထိန်းညှိပါ။
အသင့်သုပ်ထားသော ချင်းကြက်သားသုပ်ကို ဆလတ်ရွက် အနည်းငယ်၊ သံပရာသီးတို့ဖြင့် သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
မုန့်ညှင်းစိမ်း ၃စည်း၊ ကြက်ပြုတ်ရည် ၂လီတာ၊ ဆား ၁ဇွန်း၊ အသားမှုန့် ၁ဇွန်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၃တက်၊ ချင်းရည် အနည်းငယ်။
ကြက်သားကိုအကောင်လိုက်သန့်စင်ပြီး ဆား၊ အသားမှုန့်၊ ချင်းရည်(ဂျင်းရည်) အနည်းငယ်တို့ဖြင့် ကြက်သားနူးအောင်ပြုတ်ပြီး ကြက်ပြုတ်ရည်ပြင်ဆင်ထားပါ။
ကြက်ပြုတ်ရည်ထဲသို့ အသင့်သန့်စင်ထားသော မုန့်ညှင်းစိမ်းအနည်းငယ် ထည့်ပြုတ်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူဓားပြားရိုက်ထည့်ကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
ငရုတ်သီးစိမ်း ၂၀တောင့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၅တက်၊ ချင်း(ဂျင်း) အနည်းငယ်၊ ဆလတ်ရွက် ၁စည်း၊ ကြက်သားပြုတ် အနည်းငယ်၊ သခွားသီး ၂လုံး၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၃လုံး။
ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်းတို့ကို ညက်အောင်ထောင်းပြီး အသင့်ပြုတ်ပြီးအသားမွှာထားသော ကြက်သားအနည်းငယ်ကိုလည်း ထည့်ထောင်းပါ။
အသင့်ထောင်းထားသော ချင်းငရုတ်သီးထောင်းကို သခွားသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆလတ်ရွက် အနည်းငယ်တို့ဖြင့် တွဲဖက်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
Posted by Alex Aung at 6:34 AM No comments: